Amụma Nzuzo - Onye ntụgharị Akụkọ Naịjirịa
Usoro Nzuzo a na-akọwa ihe data anakọtara mgbe ị na-eji Onye nsụgharị ma ọ bụ ngwa ọ bụla ntụgharị nke Akwụkwọ Akụkọ Nigeria ("translator.ng") yana ọrụ enyere site na ya (yana “Ọrụ”), otu esi eji data nkeonwe a, kesaa.
Site n'iji ọrụ, PR KWERE anyị nkwa na
(M) I G RE, Ghọta NA KWEKỌRIVRIV ỌRIV NKP THISR THIS A, NA
(II) AREBVERRU AFỌ iri na isii (ma ọ bụ nwee nne na nna gị ma ọ bụ onye nlekọta na-agụ ma kwenye na iwu a maka gị). Ọ bụrụ na ikwenyeghị ma ọ bụ na ịnweghị ike ịme nkwa a, ịghara iji Ọrụ ahụ. N'ọnọdụ dị otú a, ị ga-akpọtụrụ ndị na-akwado nkwado site na nkata n'ịntanetị ma ọ bụ email na (a) arịrịọ nhichapụ nke akaụntụ gị na data gị.
"Usoro", n'ihe gbasara data nkeonwe, gụnyere ịnakọta, chekwaa na igosipụta ndị ọzọ.
Nchịkwa data nkeonwe
Atom Services Limited, ụlọ ọrụ edebanyere aha na United Kingdom na-azụ ahịa dị ka onye ntụgharị okwu.ng bụ ndị na-achịkwa data nkeonwe gị.
Ngalaba nke data nke mmadu anyi chikotara
Anyị na-anakọta data ị nyere anyị n'afọ ofufo (dịka ọmụmaatụ, adreesị ozi-e). Anyị na-anakọta data na akpaghị aka (dịka ọmụmaatụ, adreesị IP gị).
Data ị na-enye anyị
Enwere ike ịgwa gị ka ị nye anyị ozi gbasara onwe gị mgbe ị debanyere aha na / ma ọ bụ jiri Ọrụ ahụ. Ozi a gụnyere: aha mbụ, akara ekwentị, email (ọnụ “Ozi achọrọ”), aha ikpeazụ, foto, nkọwa adreesị, oge ọrụ.
Iji jiri Ọrụ anyị ma denye akaụntụ, ị ga-enye Ozi Achọrọ. Ga-enwe ike iji Ọrụ ahụ ọbụlagodi na ị nyeghị anyị data a, mana ụfọdụ ọrụ Ọrụ nwere ike ọ bụ naanị gị (dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịdebanyeghị akaụntụ, ị gaghị enwe ike ịkparịta ụka na ndị ọrụ ndị ọzọ , biputere mgbasa ozi, lee nkọwa kọntaktị nke ndị ọrụ ndị ọzọ).
Mgbe ụfọdụ ị nwekwara ike ị chọrọ ịnye anyị ozi ndị ọzọ na nkwukọrịta na Otu Nkwado anyị iji mezuo arịrịọ gị (dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na egbochila akaụntụ gị na mbụ, anyị nwere ike ịrịọ gị iji gosi njirimara gị site na ịnye akwụkwọ ID).
Data ndị ọzọ nyere anyị - Mgbe ị kpebiri ịbanye na iji Facebook ma ọ bụ Google, anyị na-enweta data nkeonwe na akaụntụ Facebook gị ma ọ bụ Google. Nke a gụnyere onyonyo profaịlụ gị, aha, na Facebook ID, ID Google, ndepụta ndị enyi. Maka ozi ndị ọzọ, biko rụtụ aka na Ntinye ikikere Facebook (na-akọwa ụdị ozi, nke Facebook nwere ike ịkekọrịta na ndị ọzọ na usoro nke ihe achọrọ) yana iwu data Facebook. Na mgbakwunye, Facebook na-enye gị ohere ijikwa nhọrọ ị mere mgbe ijikọ profaịlụ Facebook gị na App na ngwa ha na ibe weebụ. Knowmatakwu banyere otu Google si hazie data gị, gaa na ya Amụma Nzuzo.
Data anyị na-anakọta na-akpaghị aka:
Ihe data banyere otu ị siri chọta anyị - Anyị na-anakọta data gbasara URL gị na-ezo aka (ya bụ, ebe dị na Weebụ ebe ị nọ mgbe ị na-abanye na mgbasa ozi anyị).
Ngwaọrụ na Ọnọdụ data - Anyị na-anakọta data site na ngwaọrụ gị. Ihe atụ nke data dị otú ahụ gụnyere ntọala asụsụ, adreesị IP, mpaghara oge, ụdị na ihe nlereanya nke ngwaọrụ, ntọala ngwaọrụ, sistemụ arụmọrụ, onye na-ahụ maka ọrụ ,ntanetị, onye na-ebugharị mkpanaka, NJ ngwaike, na Facebook ID.
Ojiji data - Anyị na-edekọ otu ị si eji Ọrụ anyị emekọrịta. Dịka ọmụmaatụ, anyị na-abanye atụmatụ, na ọdịnaya ị na-emekọrịta, oge ole ị na-eji Ọrụ ahụ, ogologo oge ị nọ na Ọrụ ahụ, ngalaba ndị ị na-eji, ole mgbasa ozi ị na-ele.
NJ Mgbasa Ozi - Anyị na-anakọta Apple Identifier maka Mgbasa Ozi ("IDFA") ma ọ bụ NJ Advertising ID ("AAID") (dabere na sistemụ arụmọrụ nke ngwaọrụ gị). Cannwere ike ịtọgharịa nọmba ndị a site na ntọala nke sistemụ nrụọrụ gị (mana anyị anaghị achịkwa nke a).
Data azụmahịa - Mgbe ị na-akwụ ụgwọ site na Ọrụ ahụ, ịkwesịrị ịnye data akaụntụ ego, dị ka nọmba kaadị akwụmụgwọ gị, na ndị na-enye anyị ọrụ ndị ọzọ. Anyị anaghị anakọta ma ọ bụ chekwaa nọmba nọmba kaadị akwụmụgwọ zuru oke, agbanyeghị na anyị nwere ike ịnweta data metụtara kaadị kredit, data gbasara azụmahịa ahụ, gụnyere ụbọchị, oge na ego nke azụmahịa ahụ, ụdị usoro ịkwụ ụgwọ ejiri.
Kuki - Kuki bụ obere faịlụ ederede echekwara na kọmpụta onye ọrụ maka ebumnuche idebe ndekọ. Kuki nwere ike ịbụ kuki nnọkọ ma ọ bụ kuki na-adịgide adịgide. Otu kuki oge ga-agwụ mgbe ị mechiri ihe nchọgharị gị ma jiri ya mee ka ọ dịrị gị mfe ịnyagharịa Ọrụ Anyị. Kuki na-adịgide adịgide na-anọgide na draịvụ ike gị ruo ogologo oge. Anyị na-ejikwa pikselụ nsuso na-esetịpụrụ kuki iji nyere aka na ibute mgbasa ozi n'ịntanetị. A na-eji kuki, ọkachasị, iji mata gị ozugbo ọ bụla ị gara na weebụsaịtị anyị. N'ihi ya, ozi ahụ, nke i tinyeburu na mpaghara ụfọdụ na weebụsaịtị nwere ike ịpụta na-akpaghị aka oge ọzọ mgbe ị na-eji Ọrụ Anyị. A ga-echekwa data kuki na ngwaọrụ gị na oge ụfọdụ naanị maka obere oge.
INkpụrụ nchedo data
N'ime omume nchedo data anyị, anyị na-agba mbọ, ọkachasị, ịnye data nkeonwe:
hazie gị dabere na ebumnuche akọwapụtara nke ọma, nke ziri ezi na nke ziri ezi nke ị kwadoro;
zuru oke, zie ezi na ebughi oke ugwu nye mmadu ugwu;
echekwara naanị maka oge n'ime nke a chọrọ; na
enwere nchebe megide mbibi na mmebi iwu dịka izu ohi, mwakpo cyber, mwakpo nje, mgbasa ozi, ụdị aghụghọ ọ bụla, mmebi site na mmiri ozuzo, ọkụ ma ọ bụ ikpughe ihe ndị ọzọ.
Maka ihe anyị chọrọ, anyị na-echekwa data gị
Anyị na-ahazi data nkeonwe gị:
Iji nye Ọrụ Anyị - Nke a na-enyere gị aka iji Ọrụ ahụ n'ụzọ na-enweghị ntụpọ ma gbochie ma ọ bụ lebara mmejọ Ọrụ ma ọ bụ nsogbu ọrụ aka anya.
Iji hazie ahụmịhe gị - Anyị na-ahazi data nkeonwe gị iji dozie ọdịnaya nke Ọrụ ahụ ma nye onyinye ahaziri maka mmasị na mmasị onwe gị.
Iji jikwaa akaụntụ gị ma nye gị nkwado ndị ahịa - Anyị na-ahazi data nkeonwe gị iji zaghachi arịrịọ gị maka nkwado teknụzụ, Ozi ọrụ ma ọ bụ nkwukọrịta ọ bụla ị malitere. Nke a gụnyere ịnweta akaụntụ gị iji lebara arịrịọ nkwado teknụzụ anya. Maka ebumnuche a, anyị nwere ike iziga gị, dịka ọmụmaatụ, ọkwa ma ọ bụ ozi ịntanetị banyere arụmọrụ nke Ọrụ anyị, nchekwa, azụmahịa ịkwụ ụgwọ, ọkwa gbasara Usoro na Ọnọdụ ojiji anyị ma ọ bụ amụma nzuzo a.
Iji kpọtụrụ gị banyere ojiji nke Ọrụ anyị - Anyị na-agwa gị okwu, dịka ọmụmaatụ, site na ọkwa nzi ma ọ bụ na nkata. N'ihi nke a, ị nwere ike, ọmụmaatụ, ịnata ọkwa ma na weebụsaịtị ma ọ bụ site na email na ị nwetara ozi ọhụrụ na Onye Ntụgharị Asụsụ. Iji pụọ na ịnweta ozi ịgha aka, ịkwesịrị ịgbanwe ntọala na ihe nchọgharị gị ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka. Iji pụọ na ụdị ozi ịntanetị ụfọdụ, ịkwesịrị ịgbaso njikọ wepu aha na ntinye ụkwụ nke email site na ịkpọtụrụ ndị otu na-akwado anyị na admin@translator.ng ma ọ bụ na ntọala profaịlụ gị.
Ọrụ ndị anyị ji maka ebumnuche ndị a nwere ike ịnakọta data gbasara ụbọchị na oge ndị ọrụ anyị lere ozi ahụ, yana mgbe ha mere mmekọrịta na ya, dịka site na ịpị njikọ ndị agụnyere na ozi ahụ.
Iji nyocha ma nyochaa otu i si eji Ọrụ ahụ - Nke a na-enyere anyị aka ịghọta azụmahịa anyị nke ọma, nyochaa arụmọrụ anyị, chekwaa, melite, imepụta ihe ọhụrụ, atụmatụ, imewe, na ịzụlite Onye Ntụgharị na ngwaahịa ọhụrụ anyị. Anyị na-ejikwa data dị otú ahụ maka ebumnuche nyocha ọnụ ọgụgụ, iji nwalee ma melite onyinye anyị. Nke a na-enyere anyị aka ịghọta nke ọma atụmatụ na ngalaba nke Onye Ntụgharị ihe ndị ọrụ anyị nwere mmasị karịa, ụdị ndị ọrụ na-eji Ọrụ anyị. Maka nsonaazụ, anyị na-ekpebi otu esi emeziwanye Onye Ntụgharị dabere na nsonaazụ ndị enwetara site na nhazi a. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị achọpụta na ngalaba Ọrụ adịghị ewu ewu dị ka ndị ọzọ, anyị nwere ike ilekwasị anya na ịmezi ya.
Iji zitere gị nkwukọrịta ahịa
Anyị na-ahazi data nkeonwe gị maka mkpọsa ahịa anyị. Anyị nwere ike itinye adreesị email gị na ndepụta ahịa anyị. N'ihi ya, ị ga-enweta ozi gbasara ngwaahịa anyị, dịka ọmụmaatụ, onyinye pụrụ iche, na ngwaahịa nke ndị mmekọ anyị. Ọ bụrụ n’ịchọghị ịnata ozi-e ahịa site n’aka anyị, ịnwere ike wepu aha na isoro ntuziaka ndị a n’ukwu ala email, site na ịkpọtụrụ ndị otu anyị na-akwado anyị na admin@translator.ng ma ọ bụ na ọnọdụ profaịlụ gị
Anyị nwekwara ike igosi gị mgbasa ozi na weebụsaịtị, ma zitere gị ọkwa ịkwanye maka ebumnuche ahịa. Iji pụọ na ịnata ọkwa ntinye, ịkwesịrị ịgbanwe ntọala na ngwaọrụ gị ma ọ bụ / na ihe nchọgharị gị.
Iji hazie mgbasa ozi anyị
Anyị na ndị mmekọ anyị jiri data nkeonwe gị iji dozie mgbasa ozi ma nwekwaa ike igosi ha gị n'oge kwesịrị ekwesị. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị gara na weebụsaịtị anyị, ị nwere ike ịhụ mgbasa ozi nke ngwaahịa anyị, dịka ọmụmaatụ, na ndepụta Facebook gị.
Anyị nwere ike ịdọrọ gị mgbasa ozi site na ọtụtụ mgbasa ozi mgbasa ozi na mgbanwe, na-eji data sitere na teknụzụ mgbasa ozi na na ọrụ nke Ọrụ anyị dị ka kuki pụrụ iche, ma ọ bụ teknụzụ nsuso yiri nke ahụ, pixel, njirimara ngwaọrụ, geolocation, ozi sistemụ arụmọrụ, email.
Otu esi apụ ma ọ bụ metụta mgbasa ozi ahaziri iche
iOS: Na iPhone ma ọ bụ iPad gị, gaa na "Ntọala," mgbe ahụ "Nzuzo" wee pịa "Mgbasa Ozi" iji họrọ "Adgba Ad Track". Na mgbakwunye, ịnwere ike ịtọgharịa njirimara mgbasa ozi gị (nke a nwekwara ike inyere gị aka ịhụ obere mgbasa ozi ahaziri iche) n'otu ngalaba.
Gam akporo: Iji pụọ na mgbasa ozi na ngwaọrụ gam akporo, nanị mepee ngwa Google Settings na ekwentị mkpanaaka gị, pịa "Mgbasa ozi" ma mee ka "pụọ na mgbasa ozi nwere mmasị". Na mgbakwunye, ịnwere ike ịtọgharịa njirimara mgbasa ozi gị n'otu ngalaba (nke a nwekwara ike inyere gị aka ịhụ obere mgbasa ozi ahaziri iche).
Iji mụtakwuo banyere otu esi emetụta nhọrọ mgbasa ozi na ngwaọrụ dị iche iche, biko lelee ozi dịnụ Ebe a.
Na mgbakwunye, ịnwere ike ịnweta ozi bara uru ma pụọ ​​na ụfọdụ mgbasa ozi nwere mmasị, site na ịga na njikọ ndị a:
Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi - http://optout.networkadvertising.org/
Dijitalụ Mgbasa Ozi Mgbakwunye - http://optout.aboutads.info/
Digital Mgbasa ozi Alliance (Canada) - http://youradchoices.ca/choices
Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi (EU) - http://www.youronlinechoices.com/
DAA App Choices peeji nke - http://www.aboutads.info/appchoices
Enwekwara ike ịkwụsị ihe nchọgharị gị ịnakwere kuki kpam kpam site na ịgbanwe ntọala kuki ihe nchọgharị gị. Younwere ike ịchọta ntọala ndị a na menu "nhọrọ" ma ọ bụ "mmasị" nke ihe nchọgharị gị. Njikọ ndị a nwere ike inye aka, ma ọ bụ ịnwere ike iji nhọrọ "Enyemaka" na ihe nchọgharị gị.
Ntọala kuki na Internet Explorer
Ntọala kuki na Firefox
Ntọala kuki na Chrome
Nchịkọta kuki na weebụ Safari na iOS
Google na-enye ndị ọrụ ya ohere pụọ na mgbasa ozi Google nkeonwe na gbochie iji Google Analytics mee ihe data ha.
Facebook na-enyekwa ndị ọrụ ya ohere ịmetụta ụdị mgbasa ozi ha na-ahụ na Facebook. Iji chọta otu esi ejikwa mgbasa ozi ị hụrụ na Facebook, biko gaa Ebe a ma ọ bụ mezie ntọala mgbasa ozi gị Facebook
Iji mezuo Usoro na Ọnọdụ ojiji na iji gbochie ma lụsoo aghụghọ ọgụ - Anyị na-eji data nkeonwe iji mezuo nkwekọrịta na nkwekọrịta anyị, ịchọpụta, gbochie, na ịlụ ọgụ wayo. Site na nhazi dị otú ahụ, anyị nwere ike ịkekọrịta ozi gị na ndị ọzọ, gụnyere ndị mmanye iwu (ọkachasị, ọ bụrụ na esemokwu bilitere n'ihe metụtara Usoro na Ọnọdụ ojiji anyị).
Iji rube isi n'iwu - Anyị nwere ike ịhazi, jiri, ma ọ bụ kekọrịta data gị mgbe iwu chọrọ ya, ọkachasị, ọ bụrụ na ndị ọrụ mmanye iwu na-arịọ data gị site n'ụzọ iwu dịnụ.
Iji hazie ịkwụ ụgwọ gị - Anyị na-enye ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ akwụ ụgwọ n'ime Ọrụ ahụ. Maka nke a, anyị na-eji ọrụ ndị ọzọ maka nhazi ịkwụ ụgwọ (dịka ọmụmaatụ, ndị na-arụ ọrụ ịkwụ ụgwọ). N'ihi nhazi a, ị ga-enwe ike ịkwụ ụgwọ ma jiri atụmatụ akwụ ụgwọ nke Ọrụ ahụ.
N'okpuru ihe iwu kwadoro, anyị na-ahazi data gị
Anyị na-edozi data nkeonwe gị, karịchaa, n'okpuru ntọala iwu ndị a:
ime nkwekọrịta anyị na gị;
maka ọdịmma anyị (ma ọ bụ ndị ọzọ); N'okpuru usoro iwu a, anyị, ọkachasị:
agwa gị okwu banyere ojiji nke Ọrụ anyị
Nke a gụnyere, ọmụmaatụ, iziga gị ọkwa na-echetara gị na ị nwere ozi a na-agụghị. Ezigbo mmasị anyị kwadoro maka nzube a bụ mmasị anyị iji gbaa gị ume ka ị jiri Ọrụ anyị oge mgbe niile. Anyị na-eburu n'uche uru ndị ị ga-erite.
nyocha ma nyochaa ojiji nke Ọrụ a
Ezigbo mmasị anyị maka nzube a bụ mmasị anyị iji melite Ọrụ anyị ka anyị wee nwee ike ịghọta ihe ndị masịrị ndị ọrụ wee nwee ike ịnye gị ahụmịhe ka mma (dịka ọmụmaatụ, iji mee ka ngwa ngwa ekwentị anyị dịkwuo mfe ma nwekwuo ọyableụ, ma ọ bụ iwebata ma nwalee atụmatụ ọhụrụ).
zitere gị nkwukọrịta ahịa
Ezigbo mmasị anyị dabere na nhazi a bụ mmasị anyị iji kwalite Ọrụ anyị n'ụzọ tụrụ oke na nke kwesịrị ekwesị.
hazie mgbasa ozi anyị
Ezigbo mmasị anyị kwadoro maka nhazi a bụ mmasị anyị iji kwalite Ọrụ anyị n'ụzọ ezubere iche.
mechie usoro anyị na ọnọdụ ojiji yana igbochi na ịlụ ọgụ wayo
Ebumnuche anyị ziri ezi maka ebumnuche a bụ ịmanye ikike anyị iwu, na-egbochi ma na-ekwu banyere wayo na ojiji nke Ọrụ ahụ, na-adabaghị na Usoro na Ọnọdụ ojiji anyị.
iji rube isi n'iwu.
N'ONYE ANY WE NA-EKEkọrịta data gị
Anyị na ndị ọzọ na-ekerịta ozi na-enyere anyị aka ịrụ ọrụ, nye, melite, iwebata, hazie, nkwado, na ire ọrụ anyị. Anyị nwere ike ịkekọrịta ụfọdụ data nkeonwe, ọkachasị, maka ebumnuche yana ndị ọzọ egosipụtara na Nkebi nke 2 nke Iwu Nzuzo a. Typesdị nke ndị ọzọ anyị na-ekerịta ozi gụnyere, ọkachasị:
Ndị na-ahụ maka ọrụ
Anyị na-ekekọrịta data nkeonwe na ndị ọzọ anyị were n'ọrụ iji nye ọrụ ma ọ bụ rụọ ọrụ azụmahịa na nnọchite anyị, dabere na ntuziaka anyị. Anyị nwere ike ịkekọrịta ozi nkeonwe gị na ụdị ndị na-enye ọrụ ndị a:
igwe ojii nchekwa nchekwa (Amazon, DigitalOcean, Hetzner)
ndị na-eweta nchịkọta data (Facebook, Google, Appsflyer)
ndị mmekọ azụmaahịa (ọkachasị, netwọkụ mgbasa ozi mmekọrịta, ụlọ ọrụ azụmaahịa, ọrụ nnyefe email; dịka Facebook, Google, Mailfire)
Ndị ọrụ mmanye iwu na ndị ọrụ gọọmentị ndị ọzọ
Anyị nwere ike iji ma gosipụta data nkeonwe iji kwado Usoro na Ọnọdụ ojiji anyị, iji kpuchido ikike anyị, nzuzo, nchekwa, ma ọ bụ ihe onwunwe, na / ma ọ bụ nke ndị mmekọ anyị, gị ma ọ bụ ndị ọzọ, na ịza arịrịọ site n'ụlọ ikpe, ndị mmanye iwu. ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ na-achịkwa iwu, na ndị ọzọ na ndị ọrụ gọọmentị, ma ọ bụ n'okwu ndị ọzọ nke iwu nyere.
Ndị ọzọ dị ka akụkụ nke mmakọ ma ọ bụ nnweta
Ka anyị na-azụ ahịa anyị, anyị nwere ike ịzụta ma ọ bụ ree akụ ma ọ bụ onyinye azụmahịa. Ozi ndị ahịa n’ozuzu ha bụ otu n’ime azụmaahịa azụmaahịa azụrụ na ụdị azụmaahịa ndị a. Anyị nwekwara ike ịkekọrịta ozi dị otú ahụ na ụlọ ọrụ ọ bụla (dịka ụlọ ọrụ nne na nna ma ọ bụ enyemaka) ma nwee ike ịnyefe ozi dị otú ahụ na azụmahịa nke ụlọ ọrụ, dị ka ire ahịa anyị, nnweta, njikọta, nkwado, ma ọ bụ ire ere, ma ọ bụ na ihe omume nke enweghi ego.
Etu ị ga-esi gosipụta ikike gị
Iji na-achịkwa nke onwe gị data, ị nwere ikike ndị a:
/Nweta / nyocha / emelite / mezie data nkeonwe gị. Nwere ike inyocha, dezie, ma ọ bụ gbanwee data nkeonwe nke ị nyeburu na Translator.ng na ngalaba ntọala na weebụsaịtị.
I nwekwara ike ịrịọ otu data nkeonwe gị anakọtara n'oge ị na-eji Ọrụ ahụ na admin@translator.ng.
Ihichapụ data nkeonwe gị. I nwere ike ịrịọ nhichapụ data nkeonwe gị site na izitere anyị email na admin@translator.ng.
Mgbe ị rịọrọ ka ehichapụ data gị, anyị ga-eji ezigbo mbọ iji kwanyere arịrịọ gị ùgwù. N'ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike ịchọrọ anyị iji iwu debe ụfọdụ data maka oge ụfọdụ; n'ọnọdụ dị otu a, anyị ga-emejupụta arịrịọ gị ma anyị mezuo ọrụ anyị.
Jectjụ ma ọ bụ gbochie ojiji nke data onwe gị (gụnyere maka ebumnuche ahịa). You nwere ike ịjụ anyị ka anyị kwụsị iji ihe niile ma ọ bụ ụfọdụ nke gị onwe onye data ma ọ bụ selata anyị were ya site na izipu arịrịọ na admin@translator.ng.
Ikike itinye akwụkwọ mkpesa n'aka ndị ọrụ nlekọta. Anyị ga-achọ ka ị kpọtụrụ anyị ozugbo, yabụ anyị nwere ike idozi nsogbu gị. Agbanyeghị, inwere ikike itinye akwụkwọ mkpesa gị n'aka onye na-ahụ maka nlekọta data zuru oke.
BR BỌCH A
Anyị anaghị akpachara anya wepụta data nkeonwe n'aka ndị nọ n'okpuru afọ 16. Ọ bụrụ na ị mata na onye ọ bụla dị afọ iri na isii nyere anyị data nkeonwe, biko kpọtụrụ anyị na admin@translator.ng.
Anyị nwere ike gbanwee Iwu Nzuzo a site n'oge ruo n'oge. Ọ bụrụ na anyị kpebie ịme mgbanwe mgbanwe nke ihe nzuzo anyị, a ga-amara gị ọkwa site na Ọrụ anyị ma ọ bụ site n'ụzọ ndị ọzọ dịnụ wee nwee ohere iji nyochaa Iwu Nzuzo ahụ emezigharịrị. Site na ịga n'ihu ịnweta ma ọ bụ jiri Ọrụ ahụ mgbe mgbanwe ndị ahụ mechara dị ire, ị kwenyere na iwu nzuzo nzuzo gị emezigharị.
Anyị ga-echekwa data nkeonwe gị ọ bụrụhaala na ọ dị mkpa iji mezuo ebumnuche ndị edepụtara na Iwu Nzuzo a (gụnyere ịnye gị Ọrụ ahụ), nke gụnyere (mana ọnweghị njedebe) oge ị nwere onye ntụgharị akaụntụ. Anyị ga-ejigide ma jiri data nkeonwe gị dị ka ihe dị mkpa iji rube isi na iwu anyị, dozie esemokwu, ma mejuputa nkwekọrịta anyị.
11. Kpọtụrụ anyị
Nwere ike ịkpọtụrụ anyị n'oge ọ bụla maka nkọwa gbasara Nzuzo Nzuzo a na ụdị ndị gara aga. Maka ajụjụ ọ bụla gbasara akaụntụ gị ma ọ bụ data nkeonwe gị biko kpọtụrụ anyị na admin@translator.ng.
Na-arụ ọrụ site na Eprel, 2021